Falsafadda Hinduuga ee dib u dhalashada (Sheeko) – Kaasho Maanka
Waxaad u socotay gurigaaga marka aad dhimatay oo uu shil gaari ku dilay. Waxaad adduunka uga taktay xaaskaaga iyo laba caruur ah. Waana markaas marka aad ila kulantay, waxaadna i waydiisay, “maxaa dhacay, xaggee ayaan joogaa?” Waxaan kuugu jawaabay, “waad dhimatay” Waa ay kula noqon wayday, balse waxaad tiri, “waxay ahayd gaari nooca waa-weyn ah…” adiga oo ka hadlaya wixii kuugu dambeeyay ee aad xasuusato. “Oo hadda ma dhintay?” ayaad wali kusii dhawaaqday. “Haa, laakiin dhib ha u arkin. Qof walba waa uu dhiman” ayaan kugu iri. Geesaha ayaad eegtay, balse waxba ma aysan ahaanin. Aniga iyo adiga uun. “Waa maxay goobtan, ma aakhiraa?” Ayaad i su’aashay. “Waa ay noqon kartaa” ayaan kuugu jawaabay.
“Ma ilaah baad tahay?” Ayaad i waydiisay. “Haa, waan ahay” ayaan kuugu jawaabay. Waxaad wax iga waydiisay caruurtaadii, xaaskaagii iyo in ay wanaagsanyihiin.
Si layaab leh ayaad ii eegtay, waayo kuulamaba muuqan illaah. Qof caadi ah ayaan kuugu muuqday. Qof awood aan caddayn xambaarsan. In badan bare iskuul naxwe ayaad igu sheegi lahayd intii aad illaah igu sheegi lahayd.
“Ha welwelin. Qoyskaaga waa ay wanaagsanaanayaan. Caruurtaada si wacan ayay dhan walba kuu xasuusan doonan, marnaba hoos kuuma dhigi doonaan. Xaaskaaga dibadda waa ay ka ooyi doontaa, balse gudaha nafis ayay dareemi doontaa. Dhab marka aan u hadlo, guurkaaga waa uu burburayay. Haddii aad ku degayso, xaaskaaga waxa ay dareemi doontaa dambi in ay (geeridaada) nafis ku dareentay” intaas ayaan kugu iri.
“Hadda maxaa tala ah, ma Naar ayaan aadi mise Janno?” Ayaad i waydiisay. “Midna aadi maysid, dib baad u dhalan doontaa” ayaan kugu iri. “Hinduuga waa ay saxnaayeen marka?” Ayaad lasoo booday. “Diin walba qaabkeeda ayay ku saxantahay” ayaan kuugu jawaabay.
“Haddaba waa maxay ujeedada? Marka aan dib u dhasho, soo ma noqon doono xaashi cad? Cunug, dhammaan khibradahaygii nolosha iyo wax walba oo aan soo qabtay noloshan macno ma samayn doonaan.”
“Sidaas ma aha” ayaan kugu iri. “Waxaad xambaarsantahay dhammaan aqoontii iyo khibradihii nololihii hore. Hadda uun ayaadan xasuusan karayn.” Ayaan kugu iri. “Naftaada waa mid aad u weyn, qurux badan, kana weyn wax walba oo aad suuraysan karto. Maskaxda banii’aadanku waxa ay xajin kartaa qeyb yar oo ka mid ah midka aad tahay. Waa sidii in aad fartaada galiso koob biya ah si aad u ogaato in uu kulul yahay ama qabow yahay. Qeyb yar oo adiga kaa mid ah ayaad galinaysaa koobka, marka aad soo saartana, waxaad heshay dhammaan khibradihii ay fartu soo xambaartay”
“Waxaad banii’aadan ahayd 48 sano, walina ma aadan dareemin inta harsan ee wacyi weynahaaga ah. Haddii aan wali halkaan sii joogno, waxaad bilaabaysaa in aad wax walba xasuusato, balse ma jirto ujeed loo sameeyo sidaas inta u dhaxaysa laba nolol oo kasta.”
“Imisa jeer baan dib u dhashay?”
“In badan oo badan iyo nololo kala duwan.” Ayaan kugu iri, “Markan waxaad noqon doontaa gabar beer-qodato Shiinays ah oo joogta sanadka 540 miilaadiga.”
“Sug bal. Ma waqtiga ayaad dib iigu celinaysaa?” Ayaad i su’aashay.
“Hagaag, farsamo ahaan sidaas baan filayaa. Waqti, sida aad u garanayso, waxa uu ka jiraa oo kali ah adduunkaaga. Arrimuhu sidaasi waa ay ka duwanyihiin halka aan ka imid.”
“Oo xaggee ayaad ka timid?” Ayaad tiri.
“Waxaan ka imid meel kale. Meesha aan ka imidna waxaa jooga kuwo aniga oo kale ah. Waan ogahay in aad u baahan doonto in aad ogaato sida ay meeshaasi u taal, laakiin dhaabtii ma fahmi karaysid.”
Adiga oo xoogaa niyad jabsan ayaad igu tiri, “sug bal. Haddii aan dib uga dhashay goobo kale waqtigooda, waan isla falgeli lahaa (isla dhaqmi lahaa) isla aniga uun goor waqtiga ka mid ah.”
“Hubaal arrintaasi marwalba ayay dhacdaa. Ayada oo labada nolol kaliyah ogsoonyihiin inta ay noolaanayaan ayaad adiguna xattaa ogayn in arintaasu dhacayso [oo aad adiga isla fal galayso]”
“Haddaba waa maxay ujeedka waxan oo idil?”
“Makaa dhab baa?” Ayaan ku su’aalay. “Waxaad i waydiinaysaa macnaha nolosha? Miyaysan taasi xoogaa u muuqan faham qaldan?”
“Hagaag, waa su’aal caqli gal ah.” Ayaad kusii madax adaygtay.
Indhaha ayaan kaa eegay. “Macnaha nolosha iyo sababta aan dunidan dhan kuugu sameeyay, waa in aad adiga qaan-gaarto.”
“Ma banii’aadanka ayaad ula jeedaa? Ma waxaad doonaysaa in aan qaan-gaarno?”
“Maya, adiga uun. Dunidan dhan adiga ayaan kuu sameeyay. Nolol walba waad koraysaa oo qaan-gaaraysaa waxaadna noqonaysaa mid weyn oo garaad sare leh.”
“Ma aniga uun? Oo ka waran dadka kalena?”
“Qof kale ma jiro.” Ayaan kugu iri. “Dunidan adiga iyo aniga uun ayaa joogna.”
Waad igu dhaygagtay. “Laakiin, dhamaan dadka Dhulka joogana?”
“Dhamaan waa adiga. Nololo kala duwan oo adiga uun ah.”
“Sug. Aniga ayaa qof walba ah!?”
“Hadda ayaad fahmaysaa.” Ayaan kugu iri, aniga oo dhabarka kaa dharbaaxaya qaab hambalyo ahaan ah.
“Aniga ayaa ah qof walba oo dunida soo maray?”
“Ama soo mari doona, soo sidaas ma aha?”
“Aniga ayaa Abraham Lincoln ah?”
“Sidoo kale adiga ayaa ah John Wilkes Booth (ninkii qaarajiyay Abraham Lincoln)” ayaan kuugu daray.
“Aniga ayaa ah Hitler?” Ayaad tiri adiga oo yaaban.
“Sidoo kale adiga ayaa ah malaayiintii uu dilay.”
“Waxaan ahay Jesus.”
“Sidoo kale waxaad tahay qof walba oo asaga raacay.”
“Mar walba oo aad qof dhibaatayso,” ayaan kugu iri, “adiga uun ayaa is dhibaataynayay. Fal kasta oo naxariis ah oo aad samaynaysay, adiga ayaa isku samaynayay. Farxad iyo murugo kasta oo uu qof banii’aadan ah dareemo, ama dareemi doono, adiga ayaa dareemay”
Cabaar ayaad fakartay.
“Sabab?” Ayaad i su’aashay. “Sabab waxaan oo dhan?”
“Maxaa yeelay maalin ayaad aniga oo kale noqon. Maxaa yeelay waa sidaas sida aad tahay. Waxaad tahay mid aniga oo kale ah. Waxaad tahay cunugayga.”
Waad yaabtay, waxaadna tiri, “waxaad ula jeedaa in aan illaah ahay?”
“Maya, wali ma tihid. Waxaad tahay ilme-calooleed. Wali waad koraysaa. Marka aad noolaato nolol-banii’aadan oo idil iyo waqtigiisa, waad kortay in kugu filan waxaadna u diyaar tahay in aad dhalato.”
“Marka dunida oo idil,” ayaad tiri, “waa uun..”
“Ukun” ayaan kuugu jawaabay. “Haddana waa xilligii aad u rawixi lahayd noloshaada kale.”
Dib ayaana kuu diray.
Waa sheeko cajiiba saxib shukran.
W/Q: Gallad Gurxan 31st May 2020